राष्ट्रिय लालीगुराँस दिवस कहिले मनाउने ? | NepalDut
राष्ट्रिय लालीगुराँस दिवस कहिले मनाउने ?
नेपालदूत , बाग्लुङ
यहाँको पर्यटकीय लेक घुम्टेमा आयोजित ‘गुराँस उत्सव’मा प्रकृतिप्रेमी पर्यटक रमाएका छन् । उत्सव हेर्न पुगेका आन्तरिक पर्यटकले नयाँ वर्ष पनि सँगै मनाए । ३ हजार १ सय २० मिटर उचाइबाट नयाँ वर्ष-२०७६ लाई स्वागत गरे ।
२ दिनसम्म गुराँस उत्सव चलेको आयोजक गलकोट घुम्टे पर्यटन विकास केन्द्रले जनाएको छ । गुराँस फुल्ने याम र नयाँ वर्षको अवसर पारेर केन्द्रले विगत ७ वर्षदेखि ‘गुराँस उत्सव’ गर्दै आएको छ । वसन्तमा फुल्ने थरीथरीका गुराँसले घुम्टेको जंगल राताम्मे हुने गर्छ ।
घुम्टेको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस संरक्षणको सन्देश दिन उत्सव आयोजना गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष झंकबहादुर बस्नेतले बताए । वर्षको अन्तिम सूर्यास्त र नयाँ वर्षको पहिलो सूर्योदय हेर्न कतिपय अघिल्यै दिन घुम्टे पुग्छन् ।
विसं २०७० मा घुम्टेको धुरीमै मैत्रीपूर्ण पर्यटन भेला गरी केन्द्रले घुम्टेको पर्यटन प्रवद्र्धन शुरु गरेको थियो । धार्मिक, प्राकृतिक र जैविक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने घुम्टेको पर्यटकीय विकासमा गुराँस उत्सवले टेवा पु¥याएको छ । केन्द्रले घुम्टेलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने, संरक्षित वनक्षेत्र बनाउने र जडीबुटीको अध्ययन केन्द्र बनाउने योजना अघि सारेको छ । ‘पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत गराउन पहल भइरहेको छ’, केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज थापाले भने ।
मन्दिर पुनःनिर्माण, पदमार्गलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । सरकारी निकायको सहयोग र स्थानीयको जनश्रमदानमा हाल घुम्टेसम्म जाने छ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भइसकेको छ ।
घुम्टेको धुरीदेखि तल देउरालीसम्म सडकपुर्याउने योजना गलकोट नगरपालिकाले बनाएको छ । गलकोट नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकाको सीमामा पर्ने घुम्टेमा वैशाखे पूर्णिमामा परम्परागत मेला लाग्दै आएको छ । उक्त मेला भर्न हजारौं पर्यटक तथा भक्तजन घुम्टे चढ्छन् । पौराणिककालमा पाण्डवले घुम्टेमा तपस्या गरेको जनश्रुती पाइन्छ । सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि ५० किमि मोटरको यात्रापछि ३ घण्टाको पैदलदूरीमा घुम्टे पुगिन्छ ।